औषधिलाई धेरैले पैसा कमाउने बाटोको रुपमा बुझ्ने गरेका छन् तर, त्यो धारणा गलत हो। औषधिले रोग पार्छ भन्ने बुझिन्छ। बिरामीको जीवन बचाउने औषधि गुणस्तरको हुनुपर्छ। तर, यहाँ गुणस्तरको कुरा गर्ने निकै कम छन्। गुणस्तर भन्दा पनि सबैको ध्यान मूल्यमा नै केन्द्रित छ।
औषधि किन्दा अस्पतालको फार्मेसीमा सस्तो पर्ने तर बाहिर बजारमा किन महँगो भयो ? अस्पताल फार्मेसी र बाहिरको मूल्य तुलना गरेर औषधि कम्पनीले धेरै महँगोमा औषधि बेच्ने रहेछ भनेर आरोप लगाउँछन्। वास्तवमा यो कुरा हामीले बुझाउन नसकेका कारण पनि आम मानिसमा गलत सन्देश गएको हो। जब हामीले नै बुझाउन सकेका छैनौं भने आम मानिसले त दुईथरीको मूल्य देखेर नकारात्मक धारणा राखिहाल्छन् नि।
वास्तवमा सरकारी अस्पतालका फार्मेसीमा औषधि कम्पनीले उत्पादनमूल्य भन्दा पनि सस्तोमा औषधि दिइरहेका हुन्छन्। यो एक हिसाबले 23 गरेजस्तै हो। बाहिर बजारमा पठाउन धेरै मार्केटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा खर्च पनि बढी लाग्छ। तर, अस्पताल फार्मेसीमा टेण्डर प्रक्रियाबाट सोझै औषधि दिने गरिन्छ। त्यसो गर्दा मार्केटिङको खर्च बचत हुन्छ र हामीले बाहिर बजारमा भन्दा सस्तो मूल्यमा दिन सक्छौं।
अर्को कुरा, अस्पतालमा धेरै जिल्लाका बिरामी आउने र उनीहरुलाई सिफारिस भएको औषधिको बजार विस्तार हुने भएकाले अस्पतालमा कम्पनीहरुले नाफा नखाएर पनि औषधि दिइरहेका हुन्छन्। यो सम्बन्धित औषधिको बजार विस्तार गर्ने एउटा माध्यम पनि हो।
यसका साथै धेरै औषधि कम्पनीले व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत पनि अस्पताल फार्मेसीमा सस्तोमा औषधि दिएका हुन्छन्। तर, बजारमा पठाउने औषधि भने त्यही मूल्यमा दिन सकिंदैन। त्यसकारण अस्पताल र बाहिरको मूल्यमा फरक देखिएको हो। तर, यो भन्दैमा औषधिमा निकै धेरै मार्जिन हुन्छ, औषधि कम्पनीले जनतालाई लुटिरहेका छन् भन्नु चाहिं सरासर गलत हो।
हामीले निःशुल्क पनि औषधि दिने कुरा गर्छौं तर कतिपय अस्पतालले निःशुल्क लिन मिल्दैन, न्यूनतम गरिदिनुस् भनेर लिने गरेका छन्। त्यसैले कति अस्पतालले थोरै पैसामा पनि औषधि दिनु भएको हुन्छ। त्यस्तो औषधि भनेको 23को रुपमा फ्रिमा दिएको औषधि हो। हामीले यही कुरा बुझाउन नसकेर गाली खानुपर्ने हुन्छ।
औषधिको मूल्य नेपालमा महँगो होइन तर हाम्रो बुझाइ महँगो हो। नेपालमा मार्केटिङको समस्या रहेको छ। नेपाली बजारमा विदेशकै औषधिको बोलवाला छ। ६० प्रतिशत औषधि त विदेशबाट नै आउने गरेका छन्। विदेशी औषधिले ओगटेको बजारलाई प्रतिस्थापन गर्न हामीले ठूलो मार्केटिङ टिम नराखी सुखै छैन। त्यसकारण औषधि केही महँगो हुन गएको हो। तर, बजारमा गएर हेर्ने हो भने अस्पतालमा पाइने औषधि र बाहिर मेडिकलमा पाइने औषधिको मूल्य अन्तर १० देखि २० प्रतिशत मात्र छ।
नेपालमा एक वट्टा औषधि किन्दा पसलेले २ वट्टा थमाइदिन्छन्। अनि बाहिरबाट आएको औषधि धेरै मार्जिन राखेर बेच्ने गर्छन्। यसको व्यवस्थापनतिर सरकारको ध्यान गएको छैन। औषधि व्यवस्था विभागले विदेशबाट आएका औषधिको राम्ररी निगरानी समेत गर्न सकेको छैन। तर, नेपाली औषधि कम्पनीलाई भने अनावश्यक दुःख दिइरहेको हुन्छ।
दर्ता नभएका औषधि समेत नेपाली बजारमा भित्रिरहेको छ। तर, सरकारले रोक्न सकेको छैन। दर्ता नभएका औषधिको गुणस्तर हुँदैन, त्यसले मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पारेमा दोष कसको हुन्छ ? औषधि व्यवस्था विभागले आक्कलझुक्लल अनुगमन गर्छ। त्यसमा दर्ता नभएका कमसल औषधि फेला पार्छ तर बदनाम भने नेपाली कम्पनी हुन्छन्। यो त गलत हो नि।
नेपालमा रहेका औषधि कम्पनीहरुको गुणस्तरमा प्रश्न उठाउनुपर्ने कुनै कारण छैन। सबै राम्रा छन्, गुणस्तरका औषधि बनेका छन्। ढुक्कसँग खाँदा हुन्छ। गुणस्तरका लागि नेपाली कम्पनीले करोडौं खर्च गरेका छन्। औषधि भनेको उच्च प्रविधियुक्त उद्योग हो। त्यसकारण यसको उत्पादन खर्च महँगो हुन्छ। अन्य खानेकुरा तथा तरकारी किनेको जस्तो होइन।
नेपाली औषधि बजारमा नेपाली उत्पादकले निकै ठूलो योगदान गरेको छन्। तर, सरकारले आजसम्म केही सहयोग गर्न सकेको छैन। भारत तथा बंगलादेशमा औषधि कम्पनीलाई सरकारले निकै ठूलो सहयोग र साथ दिने गर्छ। तर, नेपालमा भने उल्टै समस्यामा पार्ने काम मात्र हुन्छ। सरकारको साथ हुने हो भने नेपालमा ८० प्रतिशत बजार हिस्सा नेपाली औषधिकै हुन्छ।
२. संकटग्रस्त स्वास्थ्य–५ : त्रुटिपूर्ण संरचनाले सेवा प्रवाहमा सकस